Proclaiming the Word - Mamantatra ny Mpamonjy; Iza moa Izy? | Outlines of Messages
Mamantatra ny Mpamonjy; Iza moa Izy?
Jaona 1, 1-3
Izao moa ny Tompo Jesosy ? Iza Izy aminao?
Ny Tompo Jesosy dia Tompo Izay anton’ny Famoronana (Jaona 1, 1-3, Efes 3, 9, Kol 1, 16, Heb 1, 1-2).
Ny agnostika (*) malaza , Robert Ingersol, nandritra ny famangiana niaraka tamin’I Henry Ward Beecher, dia nanamarika ny boriborintany na ny (globe) izay misy ireo andian-kintana heverina ho toy ny biby sy ireo kintana eny amin’ny lanitra. “Inty hoy izy no zavatra tena tadiaviko” rehefa nandinika io izy. “Iza no nanao an’io? “ Iza no nanao an’io? Raha namerina izany fanontaniana izany tao anatin’ny fihetsika tena feno fahagagana izy. “ Nahoana ry colonel, tsy misy olona nanao an’io, fa tonga ho azy teo io”.
Izy dia tsy anisan’ny voahary, Izy dia Mpahary! Izy dia samihafa amin’ny sary fahita amin’ny krismasy. Izy dia Mpamorona noho izany dia Tompo Izy! Ka moa ve Tomponao Izy?
Ny Tompo Jesosy dia Mpamonjy noho ny fahafatesany sy ny fitsanganany! (Jaona 1, 29, 3, 16-17).
Raha ny tena filànao ny fahalalàna, dia handefa mpampianatra ho anao Andriamanitra.
Raha ny tena filànao ny teknolojia, dia handefa teknisiana ho anao Andriamanitra.
Raha ny tena filànao ny vola, dia handefa mpahay ara-toekarena Andriamanitra.
Raha ny tena filànao ny fahafinaretana, dia handefa olona mpikarama ho an’izany Andriamanitra.
Nefa ny tena filàna fototrantsika dia ny famelankeloka, noho izany dia nandefa Mpamonjy ho antsika Andriamanitra.
Izy dia Namana na dia ho an’ny mpanota be indrindra aza (Samaritana –Jaona 4, 1-30, ilay vehivavy janga - 8, 1-11). Amin’ny mahaTompo Azy dia manana ny fahefana ny hamonjy Izy! Izy irery ihany no Mpamonjin’izao tontolo izao! (Jaona 14, 6, Asa 4. 12).
Ny Tompo Jesosy dia ho avy tsy ho ela ho Mpitsara! (Jaona 5,22, Rom 2, 16, 14, 10; 2 Tim 4, 1).
Ho an’ireo izay tsy manana Azy ho Tompo dia Izy no Mpitsara azy ireo!
Mila miankohoka eo anatrehany isika mba tsy ho tara loatra!
Ny Tompo Jesosy dia Namana ho an’ireo izay manaiky izany.
Amin’ny fitahiana eo amin’ny fiainana (mariazy toa Kana, Jaona 2, 1-11).
Ho an’ireo izay te-hahafantatra ny marina amin’ny ara-panahy (Nikodemosy, Jaona 3, 1-21, Petera, Jaona 21, 15-17).
Ho an’ireo marary (zanakalahin’ilay tandapa, Jaona 4, 47-54, Betesda, Jaona 5, 1-9, Jamba, Jaona 9, 6-7).
Ho an’ireo mahantra sy noana (5,000, Jaona 6, 10-13).
Isika dia afaka mamorona hevitra amin’ny elanelana voajanahary amin’Andriamanitra sy ny olona, io banga io anefa dia tsy mety feno afa-tsy amin’ny alalan’ny Mesia irery ihany! Izy no Tompo, Mpamonjy , Mpitsara ary Namana!